साहित्य | BARDIYA ONLINE | | Page 3
शितल विवशका १२ मुक्तकहरु : भनिदेउ म मुस्कुराउने कस्का लागि हो
शितल विवश १. अब भनिदेउ म मुस्कुराउने कस्का लागि हो ? कल्पनाको महल सजाउने कस्का लागि हो ? तिम्रो सम्बन्ध अब अर्कैसंग जोडीएपछि, खुसिहरू जति जोगाउने कस्का लागि हो ?? २. हामी मुना र मदन हुन सकिएन । दुई मुटु एक धड्कन हुन सकिएन । अबिश्वासको खाडल बढ्दै गएपछि, समय संगै नजिक झन हुन सकिएन ।। ३. नहुने कुरा जिन्दगीमा बारबार भैदिन्छ । नमीठो बचनले मुटु नै वारपार भैदिन्छ । अनावश्यक बोलेर फाईदा छदै [पूरा पढ्नुहोस्]
‘थारु भाषा साहित्यलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चासो नदेखाएको गुनासो’
बढैयाताल,बर्दिया । थारु भाषाका साहित्यिक सिर्जनामा कमजोरी पत्ता लगाई व्याकरणीय शैली तथा साहित्यिक लेखनी विकास गर्न थारु भाषाका लेखक तथा साहित्यकारहरुको भेला बर्दियामा चलिरहेको छ । गुनासोपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ सभा सदस्य हरि तिमिल्सिनाद्वारा थारु भाषाको पत्रिका प्रकाशन, थारु भाषाको शब्दकोष तथा व्याकरण प्रकाशनमा भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता । बढैयाताल [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल: अब गरीबले उजुरी पनि कहाँ दिने होला ?
दिपक आचार्य “जलन” सत्य बोल्नेलाई हतकडी र सजाय हुन्छ । भ्रष्टहरुकै मेरो देशमा उच्च निकाय हुन्छ। अब गरीबले उजुरी पनि कहाँ दिने होला? न्यायको मन्दिरमा स्वयम् अन्याय हुन्छ । जायज माग राखेर कोहि अनसन बसेकाछ्न, अन्धा र ठालुहरुलाई रमिता बोल्न पाए हुन्छ । कालो बजारी छ, स्वास्थ्यमा नि राजनीति छ, यहाँ भ्रष्ट मुस्कुराउँछ, गरीब असाह्य हुन्छ । जनको हकहितमा बोल्न नि सक्दैनौ भने, ए सरकार ! [पूरा पढ्नुहोस्]
बढैयामा थारु कला-संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धनका लागि साहित्यिक मेला हुने
गुलरिया,बर्दिया । थारु कला, साहित्य, संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालिकाको बढैयागाँउमा आगामी माघ ४, ५ र ६ गते थारु साहित्यिक मेला २०७४ सञ्चालन हुने भएको छ । थारु लेखक संघको आयोजना जंग्रार साहित्यिक बखेरी र कर्मशिल नेपालको संयोजनमा थारु साहित्यिक मेला सञ्चालन हुन लागेको हो । थारु साहित्यिक मेला २०७४ मुल आयोजक समितिले मगंलबार गुलरियामा [पूरा पढ्नुहोस्]
तिम्रै खुशी हेर्नको लागि बाँचेको मन्छे म त- निर्मोही सुशिल
मुक्तक १. कहिले यता कहिले उता नबाँधेको पुल जस्तो। तिम्रो मेरो माया मोह नफुलेको फुल जस्तो। गरेकी छु चोखो माया भन्छेउ सधैं तिमीले, अनयाशै लाग्न थाल्छ नफुटेको मुल जस्तो । २. घातमाथि घात गर्‍यो बातको के कुरा । नभुल्ने बचन लाग्यो बात को के कुरा। पिइ रहेछु अझै म त पिउछु कि सधैं ? पिएर पनि नलाग्ने यो मात को के कुरा। ३. तिम्रै झुठो अश्वासनमा बसेको मन्छे म त। तिम्रै जवानीको मातमा फसेको मन्छे [पूरा पढ्नुहोस्]
देखेकै छौ नदिसंग जहिलेपनि बगर मिल्नुपर्छ… [ गजल ]
गजलकार अन्जु स्मारिका (बर्दिया) भन्नेले भन्छन् हैसियत मिल्नुपर्छ थर मिल्नुपर्छ । बोलीको प्रभाव र ब्यबहारको असर मिल्नुपर्छ । तिमीपनि मेरो आँशुमा पौडिएर देखाईदेउ प्यारा, र भनिदेउ सम्बन्धमा सोचाईको स्तर मिल्नुपर्छ । यहाँ गन्तव्यमा एक्लै एक्लै हिडेर कोहि पुग्दैन, देखेकै छौ नदिसंग जहिलेपनि बगर मिल्नुपर्छ । यो हावाका प्रत्यक झोक्कामा तिम्रो स्पर्श भेट्छु, लाग्छ यो हावासंग मलाई [पूरा पढ्नुहोस्]
“काया, तिमीबिना म मात्र बाँचेर मेरो सफलताको कुनै महत्त्व रहँदैन। अबदेखि यस्तो कथा सुनाउन छाडिदेऊ ल! मननै भारी भएर आयो।” “यति धेरै माया गर्छौ करण तिमी मलाई?” “गर्छु नि, सायद नजिक भएको भए तिमीले मेरो मायाको अनुभूति गर्ने थियौ।” यस्तै कुराले काया र करणबीचको माया दिन प्रतिदिन बढिरहेको थियो। दुवै जना आफ्नो काम सकिएपछि रातभर घण्टौँसम्म फेसबुक र फोनमा कुरा गरेर समय बिताउथे। [पूरा पढ्नुहोस्]
गजल: कसरी गर्नु भन त बातचित,नबोली नबोली?
डि बि रास्कल, बर्दिया कसरी गर्नु भन त बातचित , नबोली नबोली । बनाइदिन्छ्यौ मलाई चिन्तित, नबोली नबोली । मैले मन फुकाएँ तिम्रो सामू,हारेँ पनि मैले नै, खै कसरी हात पार्छ्यौ जित, नबोली नबोली । तिमी कहाँ छ्यौ पत्तै नदिइ कसरी हुन्छ्यौ, मेरा हर कुरामा सम्मिलित, नबोली नबोली । तिमी कुरा गर्छ्यौ, मेरो आँटको कुरा गर्छ्यौ, गरिदिन्छु ज्यान नै समर्पित, नबोली नबोली [पूरा पढ्नुहोस्]
बर्दियाली साहित्य मन्चको आयोजनामा वृहद साहित्यिक कार्यक्रम सम्पन्न
ठाकुरबाबा,बर्दिया । बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिका-१ भुरिगाउँमा शनिबार वृहद साहित्यिक कार्यक्रम सफलता पुर्वक सम्पन्न भएको छ । बर्दियाली साहित्य मन्च, बगनाहाको आयोजनामा “बहुभाषिक कवि गोष्ठी एवम् गजलकार कृष्ण बिरहीका एक दर्जन गजल वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा मध्य र सुदुरपश्चिमबाट ८० भन्दा बढी श्रष्टाहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो साहित्यिक कार्यक्रममा [पूरा पढ्नुहोस्]
[गजल] म शत्रुहरुको पनि शत्रु बन्न कहिल्यै सकिन: नगेन्द्र थापा
-नगेन्द्र थापा जून मुस्कुराउछ सुर्य अस्ताउन खोज्दा । मुस्कुराउछ बच्चा खेलौना बनाउन खोज्दा । म शत्रुहरुको पनि शत्रु बन्न कहिले सकेन, झन मुस्कुराइ दिन्छन मैले डराउन खोज्दा । छन त सुन्दर फुलहरु थिए बगैचा भरि, बिचरा भमरा रोयो मैले समाउन खोज्दा । पेट भित्रै पनि कति कुरा जानेर आएका, कैयौं सिकायो बच्चाले सिकाउन खोज्दा । सायद उ प्रती प्यार नभए यस्तो नहुनुपर्ने, आँसु आफ्नै खस्यो [पूरा पढ्नुहोस्]